Zimbabweans register to vote | News24 Hello Create Profile
Multimedia > Africa > Zimbabweans register to vote
A woman has a photo taken for an identification card in order for her to register her name to vote in Harare, Zimbabwe on June, 11. (Tsvangirayi Mukwazhi, AP)
Some hundreds of people queue to register their names in order to vote in Harare, Zimbabwe. Zimbabwe authorities have begun a second round of voter registration ahead of anticipated elections which are scheduled for later this year, but the date has yet to be announced. (Tsvangirayi Mukwazhi, AP)
Some hundreds of people wait to register their names in order to vote in Harare, Zimbabwe. The election could replace Robert Mugabe who has been in power since 1980 and has been president of the country since 1987. (Tsvangirayi Mukwazhi, AP)
Hundreds of people wait to register their names in order to vote in Harare, Zimbabwe. The country's constitutional court ruled in May that President Mugabe must hold elections before the end of July. (Tsvangirayi Mukwazhi, AP)